Vaovao - Herin'ny famantarana famantarana LED eny ivelany
Taratasy fantsona LED
Taratasy fantsona hazavana aoriana
Taratasy fantsona mialoha sy aoriana
Taratasy fantsona misy jiro eo aloha
Taratasy fantsona tsy manazava
Famantarana neon malefaka
Famantarana ny hetsika amin'ny fampakaram-bady
Famantarana takamoa LED
Herin'ny famantarana any ivelany LED
Ny fikarohana dia manondro fa ny signage LED any ivelany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa na ny mety ho mpanjifa hifandray amin'ny orinasanao.
Efa ho 73% ny mpanjifa nilaza izy ireo fa niditra amina fivarotana na orinasa mbola tsy notsidihin'izy ireo taloha, miorina amin'ny marika fotsiny.
Ny mari-pamantarana eny ivelany dia matetika no teboka voalohany ifandraisanao amin'ny mpanjifa, ka izay no maha-zava-dehibe ny famoronana famantarana mazava sy manintona izay mitaona ny mpanjifa ary maneho ny traikefa hananan'izy ireo ao anatiny.
Tokony ho 6 tany ho any5% ny mpanjifa mino fa ny tsangambaton'ny orinasa dia taratry ny kalitaon'ny vokatra na ny serivisy, ary maherin'ny 50% ny valinteny fanadihadiana dia nanondro fa ny takelaka ratsy dia manakana azy ireo tsy hiditra amin'ny toeram-piasana akory.
Na dia ny zava-dehibe indrindra aza dia ny fananana famantarana ivelany ho an'ny orinasanao, dia saika zava-dehibe ihany koa ny famolavolana ny mari-pamantarana sy ny kalitao. Rehefa hita taratra io fikarohana io dia mety hitazona ny mpanjifa mety tsy hatoky ny orinasanao ny takelaka tsy matihanina. Mba hiantohana ny famantarana ny asa any ivelany dia mitondra fiara araka izay tratra, ny zava-dehibe indrindra tokony hatao dia ny manamafy fa marina sy mahasarika ny hafatrao. Raha mampiseho reraka sy triatra ny famantaranao dia mety te hieritreritra hampiasa vola vaovao ianao. Zahao ny safidinay famantarana eny ivelany mba hahitana famantarana tonga lafatra amin'ny orinasanao sy ny teti-bolanao.
Efa ho 59% ny mpanjifa no nilaza fa ny tsy fisian'ny famantarana dia manakana azy ireo tsy hiditra amin'ny fivarotana na orinasa.
Angamba ianao vao nanomboka ny orinasanao kely ary manana be dia be eo amin'ny takelakao. Na angamba eo ambanin'ny fiheverana ianao fa tsy fampanjariam-bola mendrika ny fanaovana sonia ivelany. Na eo aza izany dia averimberin'ity statistika ity fa zava-dehibe ny fanaovana laharam-pahamehana ireo famantarana ivelany. Raha tsy misy iray dia mety ho very orinasa ianao ary mety hampita amin'ireo mpanjifanao mety tsy azo itokisana ny orinasanao. Tohina amin'ny fomba hisafidianana ny takelaka ivelany an-kalamanjana amin'ny orinasanao? Anontanio ny tenan'ireto fanontaniana 5 ireto alohan'ny ividiananao mba hisafidiananao ny tsara.
Manakaiky ny antsasaky ny 50.7%, ny mpanjifa amerikanina dia nitazona orinasa tsy niriana nefa tsy nahita izany noho ny tsy fahampian'ny takelaka.
Ny vintana misy olona mitady ny karazan-vokatra amidinao na ny serivisy omenao dia avo, saingy tsy misy famantarana, ahoana no hahitan'izy ireo anao? Ny famoronana famantarana miavaka sy avo lenta an-kalamanjana ho an'ny orinasanao dia hahafahanao manamafy ny toerana misy anao ho an'ny mpanjifa, fa koa manangana fahatsiarovan-tena amin'ny marika. Amin'izany fomba izany, amin'ny fotoana ilain'ny mpanjifa mila ny vokatrao sy ny serivisinao dia hahatadidy ny orinasanao izy ireo ary hahafantatra tsara izay halehany.
Ny fahaiza-mamaky ny mari-pamantarana no zava-dehibe indrindra mahatonga ny mpanjifa hanandrana ny vokatra na serivisy fivarotana iray.
Sahirana ireo mety ho mpanjifanao. Tsy lazaina intsony fa mety tototry ny dokam-barotra isan-karazany isan'andro izy ireo. Raha tsy azo vakiana ny sonia dia azo antoka ny milaza fa tsy hiadana izy ireo ary hiezaka hamantatra izay atolotrao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fampisehoana ny famantaranao hoe iza ianao ary inona no ataonao amin'ny fomba mazava sy fohy. Avereno jerena ireo sonia nataonao mba hamaritana fa tsy misy afa-tsy ny fampahalalana tena manan-danja indrindra momba ny orinasanao ary tsy tototry ny hafatra na sary tsy ilaina, ary mora vakiana ny lokon'ny afara sy ny litera.
Fotoana fandefasana: Aug-08-2020
Rihana fahatelo, No.949-951 Baqi Rd, Shishi City, Fujian Province, Sina
Ahoana ny fomba hanaovana dokambarotra ny lalan-kivoahana amin'ny orinasa
Maninona no zava-dehibe tokoa ireo famantarana LED any ivelany
Alefaso azafady ny firaketana fangatahana teny nindramina tamin'ny endrika CDR, AI, EPS na PDF.
Aza adino ny mampiditra ny anaran'ny olona mifandray,
anaran'ny orinasa, adiresin'ny orinasa ary nomeraon-telefaona.
Guide - Vokatra asongadina - Sitemap